फौजी किराले मकैबालीलाई क्षति पु-यायो
निको भएका ५,८२३,३७१
निको भएको ४६५६
अपडेटः 2020-07-01 16:43:31 बजे ।
ललितपुर, Jun 06, 2020
दक्षिण ललितपुरको वाग्मती गाउँपालिका–१ घुसेलमा फौजी किराले मकैबालीमा क्षति पु¥याएको छ। सो किरा यस अगाडि यहाँको वडा नं २ माल्टा, ४ प्युटार र ६ आश्राङमा पनि देखापरेको थियो।
किराले पहिलोपटक प्युटारका मकैबालीमा क्षति पु¥याएको थियो। यसपछि माल्टा र आश्राङ हुँदै घुसेल पुगको गाउँपालिका कृषि विकास शाखा प्रमुख सुवास खनालले बताए।
उनले भने, 'प्युटारको लगभग ९०० रोपनी तथा माल्टा र आश्राङका पाँच–पाँच सय रोपनी जमिनका मकैबालीमा किराले क्षति पु¥याएको पाएपछि हामीले हरेक वडामा अनुगमन गर्दा यहाँ पनि पायौँ। गाउँपालिकाको बजेटमार्फत लगभग रु दुई लाखको विषादी र स्प्रे खरिद गरी किसानलाई निःशुल्क वितरण गरिसकेका छौँ।'
अब थप अन्य किसानलाई आवश्यक पर्ने विषादी गाउँपालिकाले निःशुल्क वितरण गर्न नसक्ने हुँदा इमोमेक्टिन बेन्जोएट नामक विषादी मागाइदिएर सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
विषादी किरा नियन्त्रण गर्न निकै प्रभावकारी मानिन्छ। यसले मकैको गुभो भिज्ने गरी स्प्रे गरेपछि किरा मर्छ। वाग्मतीको मकैबालीमा अमेरिकन फल वार्म नामक फौजी किरा देखिएको हो। किराले माल्टा, प्युटार र आश्राङका हरेक किसानको मकैबारीमा १० देखि १५ प्रतिशत क्षति पु¥याएको छ।
गत जेठ १३ गते वाग्मतीको वडा नं ७ गिम्दीमा आएको ठूलो हावाहुरीले यहाँको ७० देखि ८० प्रतिशत मकैबाली नष्ट गरेको थियो। कूल सात वडामध्ये घुसेल, माल्टा, प्युटार र आश्राङमा व्यापक फौजी किरा लाग्नु र गिम्दीको मकैबाली हावाहुरीले सखाप पार्नाले यो वर्ष वडा नं ३ भट्टेडाँडा र वडा नं ५ इकुडोलको मकैबाली मात्र आजसम्म राम्ररी उत्पादन भइरहेको छ।
सो किराले मकैको गुभो, धानचमरा खाइदिने र एकपल्टमा १०० देखि २०० अण्डा पार्ने हुँदा मकैबालीको समय सकिएपछि अन्य अन्न बालीमा समेत यसले असर गर्न छाड्दैन। 'यो किराको टाउकोमा वाइ आकारको सेतो धर्सा र जिउँको पछाडि भागमा खैरो रङको छ धब्बा देखिने गर्छ”, उनले थपे, 'विगतमा खोटाङ, उदयपुर हुँदै फैलिएको यो किरा हाल मुलुकका धेरै जिल्लामा देखिएको छ।'
ललितपुरमा रहेका छ पालिका ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकामध्ये कोञ्ज्योसोम महाँकाल र वाग्मती गाउँपालिका भौगोलिक दृष्टिकोणले निकै टाढा रहेका स्थान हुन्। सो तीन गाउँपालिकाको औषत पारिवारिक आम्दानी कृृषि र पशुपालन व्यवसायले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने छ।
प्रकाशित मिति: Jun 06, 2020 14:35:28
चट्याङ लाग्दा बारामा ४ जनाको मृत्यु, ७ घाइते
यूएईमा मात्र १ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउँदै
कप्दाने पोखरीको अस्तित्व गुम्ने खतरा
भारतमा ८० करोड नागरिकलाई निःशुल्क खाना खुवाइने
कास्कीमा दुई महिलासहित छ जुवाडे पक्राउ
बेहुली लिन हिँडेका बेहुलालाई प्रहरीले पास नभएको भन्दै बिच बाटोमै रोकिदियो
सहायक रथी रावल र महासेनानी खड्कालाई कारवाही
चीनमा भारी वर्षाबाट १४ जनाको मृत्यु, ८ बेपत्ता
महिलालाई पतिको थर लेख्न बन्देज लगाउँदा नेपाली समाज विघटनतिर जान्छ : विजय सुब्बा (भिडियाे)
गन्धर्व श्रृ‌ंखला-४ : सारंगी रून्छ (भिडियोसहित)
नेकपा अध्यक्षको फरक सोफा, नेताभित्र पस्न नसकेको गणतान्त्रिक चेत
त्यो कर्णाली, यो कर्णाली र भविष्यको कर्णालीः के हो विकास र योजनाको मियो?
युद्वकी कमरेडको दुःख: खाने र बस्ने ठेगान छैन (भिडियो)
एमसीसीले बढायो सम्झौता कार्यान्वयन सुरु गर्ने म्याद
टिक टक बन्द गर्ने निर्णयले नेपालीमूलकी निशा गुरागाइँ प्रभावित, फलोअर्स मात्र २ करोड ७९ लाख
अमेरिकाबाट फर्के ५२४ नेपाली, लगाए राजदूत कार्कीमाथि 'कमिशन' खाएको आरोप
सुस्मिता हत्याकण्ड: ससुराद्वारा मृतकमाथि बलात्कारकाे प्रयास, सामाजिक प्रतिष्ठा जाने डरमा हत्या
'कतै उनीहरू नै त यो घटनामा संलग्न छैनन् बाबा?'
सहरका खुला ठाउँ मासेर मेयरको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’
घरायसी फोहोरबाट बनाउन सकिन्छ घर सजावटका सुन्दर वस्तु
सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरीका दुःख– वारिपारिका आफन्तको चापदेखि व्यापारीको दबाबसम्म !
लकडाउनले लतारेको भुइँ मान्छेको दैनिकी